Kedu ụdị akụrụngwa nke ụlọ ịsa ahụ dị mma? -Kitchen Faucets, ite dị, ebe a na-asa ahụ
Home / Foset Guide / Kedu ụdị akụrụngwa ụlọ ịsa ahụ dị mma?
Kedu ụdị akụrụngwa ụlọ ịsa ahụ dị mma?
2020 / 10 / 22 nhazi ọkwaFoset Guide 4681 0
Chọ mma siri ike, na ịzụta siri ike karịa. Karịsịa maka ngwa ụlọ ịsa ahụ dị ka ngwa ịsa ahụ nwere ihe ndị chọrọ ibu ma dị mkpa itinye ya na taịl ahụ, ọtụtụ mmadụ anaghị achọ ibute ụzọ ịgbanwe ha mgbe echichi, yabụ ha na-akpachapụ anya karịsịa mgbe ịzụrụ.
1. Nyocha nke ụdị na ọrụ nke ngwa ngwa ụlọ ịsa ahụ
Nkewa site na ebumnuche, akụrụngwa ime ụlọ ịwụ bụ ihe a na-ahụkarị: akwa nhicha / mgbaaka, akwa nhicha ahụ, nkata nkata, akwa nhicha akwụkwọ, brọsh ụlọ mposi, wdg. ma weta ịdị ọcha na ime ụlọ ịwụ. Sense nke iji.
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, n’ụlọ oriri na nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ ezinụlọ, ụdị enyo a na-etinye n’elu mgbidi ya na mkpanaka telescopic abụrụla ihe a ma ama-enyo nkịtị na iko na -eme ka ihe dị elu, nke dị mma maka imepụta ọmarịcha mma. Ọ bụkwa a ime ụlọ ịwụ ngwa na nnọọ ezigbo enyi ndị na-amasị etemeete.
E nwere ọtụtụ ụdị nke ime ụlọ ịwụ, na nke ọ bụla nwere ezigbo ọrụ ya. Iji zụọ ahịa ma dozie isi ihe mgbu ndị ọrụ na-ahụ na ndụ, ọtụtụ azụmaahịa na-aga n'ihu imelite, melite ma gbasaa ụdị ọrụ ọhụụ.
Ndị a bụ ụfọdụ atụmatụ kwesịrị nlebara anya ịkọrọ gị, ma nabata ịhapụ ozi iji gbakwunye:
1. Towel mmanya / akwa akwa akwa akwa
A na-arụkarị ụlọ ịsa ahụ dị ka ebe dịpụrụ adịpụ na-enweghị ventilashị n'akụkụ niile. Ọtụtụ oge akwa mmiri ahụ sitere n'abalị gara aga ga-enwe isi pụrụ iche ma ọ bụrụ na akpọnwụghị ya n'abalị. A na-eji ụfọdụ ndị ịchekwa ego ma ha adịghị njikere ịgbanwe akwa nhicha ahụ mgbe niile. Ruo ogologo oge, akwa nhicha ahụ abụghị naanị na ọ nwere mmetụta nke nnyapade, Na ọbụna ebù pụtara, nke dị njọ.
NDMỌD:: Etinyela osisi ahụ nso na mgbidi. Maka ezinụlọ nwere ezi ezinụlọ, tụlee ihe mkpuchi ọtụtụ osisi ma ọ bụ ogologo iji mee ka ohere ahụ koro.
Enwere nnukwu oghere ebe a: Ahụla ụdị osisi okpukpu abụọ nke bara uru na ịchekwa ohere. Ọ bụrụ na ebe dị n’etiti mkpara abụọ ahụ dị warara, akwa nhicha ahụ abụọ agaghị ehicha, nke dị njọ karịa otu ụdị okporo osisi.
Ugbu a, e nwere akwa eletriki eletrik na ahịa, nke nwere ike ikpo ọkụ na nhicha akwa nhicha, mana ọnụahịa dị elu, ndị nwere ọnọdụ ahụ nwere ike ịzụta ha, nke na-eme ka obi ụtọ dị ukwuu!
2. Nkata nkata / nkata nkata
Enwere otutu ihe ka etinye ya na ebe a na-asa mmiri: shampoo, conditioner, nkpuchi ntutu, gel ịsa ahụ, sikrob, na-ehicha ihu, mmanụ dị ọcha, wdg, gbakwunyere ya maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụ ọhụrụ, yana mkpokọta ego bụ X2. N'oge a, a centralized ebe nchekwa dị mkpa. Nkuku nkuku bụ ezigbo nhọrọ. Jiri nkuku nke ebe a na-asa mmiri ka ị ghara iwe oke ohere. Ọ dị nso na mfe ịnwe mgbe ịsa ahụ.
NDMỌD:: Akara nkata ndị a na-ejikarị nwere otu-oyi akwa na okpukpu abụọ, na ụfọdụ ụdị nwere okpukpu atọ na okpukpu anọ. N'izugbe, okpukpu abụọ bụ ụdị nke ndị mmadụ na-ahọrọ. Nnukwu na obere karama nwere ike ijide ihe dị ka karama 8-12, nke nwere ike ịchọta mkpa ezinụlọ nke mmadụ atọ.
Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ịnweghị akụkụ kwesịrị ekwesị maka nrụnye, ị nwekwara ike ịhọrọ nkata nchekwa mgbidi ahụ egosiri n'okpuru ebe a, yana omimi nke 12 ~ 15cm, ka ị nwee ike idowe ihe na-enweghị oke mgbidi ahụ ma tinye aka na ya ebe ọrụ.
Na mgbakwunye na ncha ntutu, gel ịsa ahụ na ngwaahịa ndị ọzọ, ebe a na-asa ahụ enweghịkwa ebe ọ ga-etinye obere ihe ndị dị ka mkpuchi ịsa ahụ, akwa nhicha ahụ, brushes ịsa ahụ, na brushes nke ncha ntutu. Ọtụtụ ndị ga-etinye ha ozugbo na mmiri. Nghọta, na-ele nnọọ anya. N'oge a, ụfọdụ nkata nkata ịsa ahụ na-echebara mkpa ndị a echiche, ma gbakwunye nko, ebe ndị na-egbochi mmiri na ọrụ ndị ọzọ na ngwaahịa. Nwere ike ịhọrọ ịhọrọ dịka mkpa gị mgbe ịzụrụ.
N’ezie, a na-ahụkwa ọrụ nke ịkwụnye n’elu site n’ịgbakwunye nko. Nwere ike ịzụta ha site n’ịchọ isiokwu dịka “S nko” na “otu nko”.
3. Onye na-ejide anụ ahụ
Dị ka aha ya na-egosi, a na-eji ya etinye akwa nhicha. Stylesdị ọdịnala dị na ahịa bụ isi dịka e gosipụtara na ụdị abụọ a. Onye ziri ezi nwere ogwe mmiri na uzuzu, ma akụkụ ahụ enweghị ike igbochi ya, ya mere, mmetụta adịghị mma, gbakwunyere ugbu a onye ọ bụla maara Iji kewaa akọrọ na mmiri, ọrụ a na-aghọ ọbụna ihe na-adịghị atọ ụtọ.
N’afọ ole na ole gara aga, igwe ekwentị amabeghị aka. Ọtụtụ ndị nrụpụta amalitela ịgbakwunye usoro nchekwa na ndị na-ejide anụ ahụ. Ọrụ a dị mma. Enwere ebe maka ekwentị mgbe ị na-aga mposi. Nye na-eji ya?
4. brushlọ mposi
Brushdị ụlọ mposi a na-agbanye mgbidi na-adịkarị n'ahịa, ọ na-ejikwa iko na-acha translucent friji, nke bụ ụdị kpochapụla. Otú ọ dị, ihe dị njọ bụ na iko ahụ ga-acha edo edo mgbe ogologo oge gasịrị, a ga-ahụkwa unyi ahụ site na matte transperent, nke na-enwe mmetụta na-asọ oyi; ụdị mgbidi dị na mgbidi adịghị mfe dochie.
E jiri ya tụnyere ụdị mgbidi a na-agbanye na mgbidi, m na-ahọrọ ngwaahịa ndị dị ka ahịhịa mposi nke nwere ike ịmegharị n'ụzọ dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, ụdị nke a na-eguzo n'elu ala nke egosiri n'okpuru ebe a, a pụrụ ịdọrọ tank dị n'ime ya kpamkpam, nke dị mfe maka nhicha ma dị mfe iji dochie ya mgbe ọ na-eyi; ọdịdị ahụ dịkwa oke elu na mbara igwe, atụfula ego iko.
2. Nnyocha nke ihe na uru na ọghọm nke ngwa ngwa ime ụlọ ịwụ
Na ebe dị elu nke iru mmiri nke ime ụlọ ịwụ ahụ, ihe dị mma na-ekpebi ahụmịhe na ndụ nke ngwa ngwa ime ụlọ ịwụ. A na-ekwu na ihe anọ dị na ahịa na-enwe uru na ọghọm ha, ọ nweghịkwa nke zuru oke.
Ihe ndị a bụ nyocha maka gị n'otu n'otu, ị nwere ike ịhọrọ dịka ọnọdụ na mkpa gị si dị.
1. Okpokoro ọla
Uru: ezigbo ntachi obi, ọdịdị dị mma, uru dị elu, ọkwa dị elu
Ọghọm: dị oke ọnụ
Brass abụghị ọla kọpa 100%, mana ọla kọpa, dị ka H59, H62 ọla kọpa (ọnụọgụ bụ ọla kọpa). Ọ bụ ezie na ọnụahịa nke akụrụngwa adịghị ala, ọnụahịa nhazi ahụ dịkwa elu, mana n'ihi na ọla nwere nnukwu mmachi adhesion, iji ya ogologo oge anaghị adị mfe ịpụpụ, ma nwee ọfụma. Ọtụtụ ụdị dị ukwuu na ime ụlọ ịsa ahụ na-ahọrọ ihe ọla maka usoro electroplating, na ọdịdị nke ngwaahịa a na-enwu gbaa. , Ọgaranya na ederede, enwere ike ịsị na ọ bụ nhọrọ nke ogo dị elu.
2. Igwe anaghị agba nchara pendant
Uru: ọnụahịa dị oke ala, ezigbo ike na nkwụsi ike
Udi ọghọm: ọdịdị na udiri ahụ dịtụ ọkara
Igwe anaghị agba nchara pendants bụ ndị nkịtị. E nwere ụdị abụọ nke 201 na 304. Ha dị iche na nhazi, arụmọrụ na ọnụahịa. 201 nwere ọnụ ala na arụmọrụ ejighị n'aka. Ọ dị mfe nchara mgbe etinye ya na gburugburu ebe iru mmiri ruo ogologo oge n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ; 304 nwere oke ọnụ na ogo ya. Na arụmọrụ ka mma, ọ dịghị mfe nchara na gburugburu iru mmiri.
Ekwesiri ka emeputa elu nke ihe 201, na ihe 304 na-agbachasịkarị, mana n'ihi ọdịnaya dị elu nke nickel, elu ahụ ga-adị ntakịrị acha. E kwuru ebe a na electroplating n'elu igwe anaghị agba nchara pendants ga-adị mma karị, mana ọ dịghị mfe ịmata ọdịiche dị na uru na ọghọm (201 ma ọ bụ 304). Nke a bụ nkwanye: 304 kwesịrị ịchọ ihe osise waya ma ọ bụ na-egbu maramara n'elu. Electdị electroplating kwesịrị ịmepụta nnukwu onye na-emepụta ihe, na ihe ahụ ga-apụta ìhè karị.
N'ozuzu, ike, arụmọrụ, na nkwụsi ike nke igwe anaghị agba nchara ka dị mma, mana ọdịdị na ọdịdị dị ala karịa ọla ọla.
3. Aluminom pendant
Uru: ọnụ ala, ọkụ na-adịgide adịgide
Ọghọm: otu ọdịdị, ike ike ịrụ ọrụ, ogologo oge ọchịchịrị na iru mmiri gburugburu ebe obibi
Oghere aluminom n’onwe ya dị nfe, ịdị arọ ya na nchapụta ya dịkwa njọ karịa nke ọla kọpa. A na-ejikarị ọla ọcha matte ọcha. Ọ bụ ezie na udidi ahụ dị nkezi, mana n'ozuzu ọ na-ebu ezigbo ibu ma ọ dịghị mfe nrụrụ. Ọnụ ego ahụ dị ntakịrị, ị nwere ike ịzụta ihe eji achọ ụlọ ịsa ahụ zuru ezu maka mmadụ abụọ ma ọ bụ narị atọ.
Na Japan, ihe mkpuchi aluminom nke ụfọdụ ndị na-emepụta dị ezigbo mma, ọnụ ahịa ahụ adịghịkwa ala; mana na China, n'ihi oke ihe isi ike na nhazi (aluminom nwere nnukwu agbaze), ọdịdị ahụ na-adịkarị mfe ma ọrụ aka ahụ siri ike, ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ dị egwu Ọ na-agbada na ngwongwo ndị dị ala. Ọ bụ ezie na ihe mkpuchi aluminom agaghị agba nchara, ha ga-eme ka oxidized ma gbaa ọchịchịrị ma ọ bụrụ na ekpughere ha iru mmiri dị elu na ime ụlọ ịwụ ahụ ogologo oge.
Ihe kpatara ịzụta: Enwere mmachi iji zụta ego
Uru: ụdị dị iche iche, dị ọnụ ala karịa ọla
Ọghọm: mekwuo ngwa, plating ga-ada mgbe ogologo oge gachara
Zinc alloy nwere ike plasticity, ala na-eri nke usoro imewe dị ka ekwe (banyere 2/3 nke ọla), na ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke ụlọ ịwụ ngwaike. N'ihi adhesion nke zinc alloy na oyi akwa electroplated, ọ bụ ezie na ọdịdị nke ngwaahịa zinc alloy mgbe ọ dị ọhụrụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọla kọpa electroplating, nkwụsi ike ka njọ. Mgbe ogologo oge gachara, ihe mkpuchi ahụ ga-ada ma bee. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka isi ahụ na China. Ngwa, dịka aka, mkpuchi flange, wdg, iji belata ụgwọ.
Na mba ọzọ, ụfọdụ ụdị ndị nwere akara nwere zinc alloy dị ọcha (GROHE, Hansgrohe), mana na China, ndị nrụpụta ole na ole na-ejikarị zinc alloy eme ihe dị ka anụ ahụ. Mgbe ị na-azụ ihe, payaa ntị na ịmata ọdịiche dị n’ahịa na-abaghị uru. A na-ere akwa akwa zinc dị ka ọla ọla.
Ihe mere maka ịzụ: agafeghị oke price na ezi ịke.
Ntụziaka ntinye: ★ ★ ☆
3. Iku nkwanye na comparative zuo analysis
Enwere ọtụtụ isi ihe ọmụma, mana ọ bụghị mmadụ niile hụrụ ya n'anya, yabụ kedu ka esi azụta ngwa ngwa ụlọ ịsa ahụ na isi mmalite ya?
Dị ka okwu a si kwuo, enwere ọpụrụiche na ụlọ ọrụ nka, na akara nke na-arụ ọrụ dị mma na seramiiki anaghị arụ ezigbo ọrụ na ngwaike. Ọ bụrụ na ịchọrọ uru maka ego ma nwee ike ịmịkọrọ mmiri ozuzo na igirigi, ị ga-ebu ụzọ chọpụta ụdị akara dị mma maka ngwa ụlọ ịsa ahụ. Anyị agaghị ewebata ụdị ndị mba ọzọ toro ogologo. Brandsdị ụdị mbụ nke German nwere ike iri puku kwuru puku, akwa nhicha ahụ nwere ike iri puku atọ, nke bụ enweghị ngọzi n'ezie. Ndị a bụ ụfọdụ ụdị ngwa ọrụ ngwaike ama ama nke na-eche na ọnụahịa ahụ adịghị mma.
1. Dilang: M na a professionally eme ụlọ ịwụ ngwa na n'oge gara aga 20 afọ. M gara ha showroom na azụmahịa njem tupu. A na-ewere electroplating dị oke elu. Ọnọdụ ahụ dị elu-elu, yabụ ihe eji arụ ọrụ ụlọ ha bụ ọla kọpa, ọnụahịa ahụ adịghịkwa ọnụ ala, mana e jiri ya tụnyere ọtụtụ puku ụdị mba ofesi dịka GROHE, nke ahụ bụ ihe na-enweghị isi.
2. Moen: yingzụta ọkpọkọ na mmiri ozuzo kwesiri ịkwado, yana njikwa njikwa ngwaahịa a na-eme nke ọma. Ngwongwo ha dị iche iche, mmiri ozuzo na ngwaike ndị ọzọ, ma e wezụga ọla kọpa, bụ igwe anaghị agba nchara, mana ọnụahịa dị elu.
3. Hengjie: Tumadi-arụ seramiiki ịdị ọcha ware, nakwa dị ka ngwaike pendants. Ọtụtụ mmadụ zụtara ụlọ mposi ha ma hụ na ha dị mma. A na-azụta ngwa ndị ọzọ n'ụlọ ya, ogo dị elu karịa nkezi.
4. Yading: Ikwu okwu banyere ime ụlọ ịwụ hardware, m kwere na onye ọ bụla bụ maara na a ika. A na-ebupụ ọtụtụ ngwaahịa ha, ihe dị ka 70% n'ime ha na-ebupụ Europe na United States. Ha na-aru oru di nma na ichota nke oma, okwesighi ka ekwuputa na ulo.
5. Songlin: Ọ malitere dị ka OEM ma nwee akụkọ ihe karịrị afọ 20 na ụlọ ọrụ ngwaike ịdị ọcha. N'ime afọ ole na ole gara aga, ọ bụ n'ime ahịa ụlọ ma hụ mgbasa ozi site n'oge ruo n'oge. N'ileghachi anya n'ụdị na ọnụahịa, echere m na ọ dị mma.
6. Jiu Mu: E nwere ọtụtụ mgbasa ozi na ọ bụ ama ama. Ebumnuche, enwere ndị akpọrọ Jiu Mu banyere ngwaahịa ị ga-azụ. Ngwa akụrụngwa bụ isi dị mma, mana ọ na-atụ aro ịzụta ha na ụlọ ahịa flagship, ndị na-ere ahịa ga-echefu ya.
7. Kabe: A Wenzhou ụlọ ọrụ, karịsịa ụlọ ịwụ ngwa aka na a zuru ezu nso nke ngwa, ụdị nile nke ihe, na price bụ dịkwa nnọọ oké ọnụ.
8. Submarine: Ọ dị mma na nhazi ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara na ihe ọgbụgba ndị ọzọ. The ụlọ ọrụ bụ isi ụlọ ịwụ ngwa, ma ha kasị ama ngwaahịa bụ n'ala igbapu !!! Ọ ka nwere aha ọma na e-azụmahịa, ọnụahịa ahụ dịkwa obere.
Were otu ngwaahịa dị ka ihe atụ iji nyochaa otu esi ahọrọ pendants nke otu ihe ahụ na ụdị dị iche iche:
1. Oghere aluminom ihe-okpukpu abụọ-nkata nkata
Ikwu okwu banyere oghere aluminom pendants, mu onwe m na-amasi Kabe.
Ọnụahịa ahụ bụ otu akụkụ. Enwere ike iji ngwaahịa ahụ tụnyere ezigbo nkata ụlọ ịsa ahụ akuku na foto dị n'elu: n'okpuru otu ọkụ ahụ, nkata nkuku Kabe na-ele anya dị nro na ọcha, dị oke oke, ma nwee ihu ọma, ọ nweghịkwa ájá doro anya na-emetụ. Mmetụta ọka; nkata itoolu a na-azụ anụ nkata yiri nke dị gịrịgịrị, nke nwere ike ịbụ nsogbu nke nnyefe awara awara. A ka nwere ihe nrịba ama n'elu, na ụdị adịghị ike, mana ọ dabara nke ọma, ọtụtụ oghere nwere ezigbo nsị mmiri
2.304 igwe anaghị agba nchara-ụlọ mposi njide
Igwe anaghị agba nchara pendants na-atụ aro ka mesoo ya na enyo enyo na waya ịbịaru. Mgbe ọgwụgwọ enyo, elu nke pendant ga-egosiputa ederede na-enwu gbaa dị ka electroplating, nke mara mma karịa, kamakwa n'ihi na nchara nchara nchara ga-adị obere. Ihe a na-egbuke egbuke bụ odo odo, na-enwe mmetụta dị arọ. Banyere ịma mma ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dabere na onye ahụ.
3. Brass ihe-asa akwa akwa akwa
Ọ bụrụ na ika ahụ kwadoro ya, Dilang rụrụ ezigbo ọrụ! Ihe a na-etinye na pendant ha dị oke ọnụ ahịa ya. Na mgbakwunye, enwere ike tụọ ọkpụrụkpụ nke ihe ahụ site na ibu. N’ikwu ya n’ụzọ dị mkpirikpi, ọ ga-abụ na ọkpọkọ ọkpọ ahụ na-adịkarị njọ; enwekwara nha, dị ka e kwuru n'elu, iji kwado ihicha nke ọtụtụ akwa nhicha ahụ, ogologo na nkwụsị nke mkpara kwesịrị ịdị ogologo / buru ibu, ogologo mkpanaka ahụ dị isii ruo narị asaa, dabere na gburugburu nke gị ụlọ ịsa ahụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta akụrụngwa ime ụlọ ịwụ, ịchọrọ ọnụahịa nke 70 $ na agwa dị mma. I nwere ike ịmụ banyere Kabe. Maka nnukwu mmefu ego na echiche nke okomoko, lee Dilang. Agaghị m ekwu ọtụtụ ihe, enwere m olile anya na ihe ọ bụla ị kwụrụ bụ nke ọma.
Nke gara aga :: The Ultimate Guide To How To Choose 6 Categories Of Bathroom Ngwa Osote: Delta foset Nyocha: yingzụ Ntuziaka maka Kitchen, athlọ ịwụ, ịsa ahụ Systems, na ite fillers